Oge Nkiti | Ulogu.org
6 articles Oge Nkiti
ỌMỤMỤ JỌN ONYE OME MMIRICHUKWU
Posted in Oge Nkiti
UKWE MBATA Chukwu zitere otu nwoke onye aha ya bụ Jọn. Ọ biara ịgbara ìhè ahụ akaebe, ịkwado ndị tosiri etosi maka Dinwenu. EKPERE MMEGHE O Chukwu onye kpọnitere Jọn onye na-eme Mmirichukwu ka ọ kwado mba ga-etosi Kristi Dinwenu, biko, anyị na-arịọ Gị ka inye ndị nke Gị amara nke aṅụrị nke ime mmụọ…
ỤKA NKE IRI N’OGE N’OGE NKITI NKE ỤKA
ỤKA NKE IRI N’OGE N’OGE NKITI NKE ỤKA UKWE MBATA Dinwenụ bụ ihe na nzọpụta m, onye ka m ga-atụ egwu?Dinwnenu bụ ebe mgbaba m, onye ga-eyi m egwu? Mgbe ndi ajọ-omume na-achụ m, ha ga-akpọbị ụkwụ ha, daa. EKPERE MMEGHE O Chukwu, onye ìhè ọma nile si n’aka ya abịa, biko mee k’anyị bụ…
IHE ỌGỤGỤ ỤKA PENTIKỌST, ARỌ NKE ABỤỌ
IHE ỌGỤGỤ ỤKA PENTIKỌST, ARỌ NKE ABỤỌ UKWE MBATA Mmụọ Nsọ nke Dinwenu ejuputara ụwa niile. Ọ na-jikota ihe niile ọnụ wee marakwa okwu ọbụla nke mmadụ kwuru, aleluia. EKPERE MMEGHE O Chukwu, onye si na nnukwu ihe omimi nke ụbọchị taa edo ụka ya asọ n’ụwa niile, wụkwasa, anyị na-arịọ gị, onyinye nke mmụọ…
ỤKA NKE ASAA N’OGE MBILITE N’ỌNWỤ KRISTI, AFỌ NKE ABỤỌ
UKWE MBATA Dinwenụ nụrụ olu m mgbe m kpọkulu Gị. Mkpụrụobi m n’ agwa m ka m chọba ihu Gị; Ihu Gị ka m na-achọ; Ezolarịla m ihu Gị, aleluya. EKPERE MMEGHE Nna, biko nụrụ arịrọ anyị ma nyere anyị aka icheta n’ime obi anyị na Kristi onye nzọpụta anyị binyere Gị n’otito, kwere anyi…